Gary Neville Oo Ku Booriyay Manchester United Inay U Dhaqaaqdo Erling Braut Haaland
HomeWararka CiyaarahaGary Neville oo ku booriyay Manchester United inay u dhaqaaqdo Erling Braut Haaland
Gary Neville ayaa ugu baaqay kooxdiisa hore ee Manchester United u dhaqaaqo Borussia Dortmund xidigeeda Erling Braut Haaland xagaaga soo socda, waxaana uu sidoo kale soo jeediyay in saddex ciyaaryahan ka tagi kara Kooxda.
21-jirka reer Norway ayaa noqday mid ka mid ah weeraryahannada loogu doonista badan yahay dunida, iyadoo kooxaha United, Chelsea , Manchester City , Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay la socdaan xaaladiisa.
United ayaa go’aansatay inay Cristiano Ronaldo dib ugu soo celiso Old Trafford xagaagan, si kastaba ha ahaatee Neville ayaa aaminsan in Red Devils ay tahay inay weli eegto inay bartilmaameedsato Haaland, kaasoo uu dareensan yahay inuu weerarka ku wehelin karo 36 jirka.
Waxaan u malaynayaa in Manchester United sannadka soo socda ay waayi doonto Anthony Martial , waxay waayi doonaan Juan Mata [iyo] Edinson Cavani wuu bixi doonaa maxaa yeelay waxay ka heleen sanad kale. Sidaas darteed waxay boosas u bannaan doontaa in la buuxiyo,” Neville ayaa sidaas u sheegay Sky Sports News. .
“Haddii Haaland la heli karo xagaaga soo socda oo ay doonayaan inay heshiis la galaan wakiilkiisa – taas oo ah waxa ugu weyn Haaland – markaa Manchester United waa inay isaga tagtaa.
“Cristiano wuxuu la ciyaaray Karim Benzema , Gareth Bale . Ole Gunnar Solskjaer ayuu ugu baaqay in uu sameyn karo fursadaasi.
Haaland ayaa si wacan ku bilaawday ololaha cusub ee kooxda iyo dalka, isagoo dhaliyay 13 gool sagaal kulan oo uu u saftay Dortmund iyo Norway.